Ask community help
အခ ပေး အသုံးပြုသူတွေ နဲ့ တစ်စုံတစ်ခု မေးမြန်းချင်တယ် ဆိုရင် Messenger က နေ ပြီးတော့ မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ အသုံးပြုသူတွေ အ နေ နဲ့ ဇော်ဂျီက နေ ယူနီကုဒ် အ ပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်တာ နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ မေးချင်တယ် ဆိုရင် Unicode နဲ့ ပက်သက်ပြီး အကူအညီ အများအပြားပေးနေတဲ့ Facebook Group တွေ မှာ မေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အောက်မှာ Facebook Group တွေ ရဲ့ လိပ်စာ ကို ထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်။ အခမဲ့ အသုံးပြုသူ အ ရေ အတွက်က အရမ်းများတာကြောင့် တစ်ယောက်ခြင်းစီကို Messenger က နေ ပြန်မ ဖြေ ပေးနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါနော်။
Myanmar Unicode Migration Group
Group Description နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒလမ်းညွှန်မှု၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ် နှင့် ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရှိ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဖတ်ရှုရေးသားသူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁)ရက်တွင် နိုင်ငံတကာသုံး စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ် သို့ တစ်ပြိုင်တည်း ကူးပြောင်းမည်ဟု ကြေညာထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ အများပြည်သူ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ကူးပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုစေရန် ဤ Group ကို တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Group Description Support Standard Unicode for Myanmar Language. www.mmunicode.org နှင့် www.unicode.today မှာ လိုအပ်သော ယူနီကုဒ် အကူအညီများ အထောက်အကူများ အများကြီးရရှိနိုင်ပါသည်။ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ နည်းပညာခေတ်ကို အမြန်ဆုံး လိုက်နိုင်ဖို့ အခုပဲ ယူနီကုဒ်(Unicode)သုံးကြပါစို့။
Let's use MM Unicode ယူနီ ကူညီ
Group Description မြန်မာယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုတတ်ရန် ကူညီပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေများ ယူနီကုဒ်စနစ်အတွက် သိလို သုံးလိုသည်များကို ဂရုသို့ပူးပေါင်းကာ အကူအညီတောင်းနိုင်ပါသည်။
Myanmar Unicode Font Users
Group Description Doesn't have clear description.
Developed By Greenish Team
ရန်ကုန်မြို့၏ နွေးထွေးသော နေရောင်ခြည်အောက်တွင်